လက်ရှိမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ချောက်ချားစရာ Us ဇာတ်ကား – For her myanmar
Posted on April 1, 2019 April 1, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
Horror ကားထဲမှာမှ plot twist တွေ၊ မြှုပ်ကွက်တွေ ရှယ်ပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ညွှန်းပါဆိုရင် အခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ Us ရုပ်ရှင်ဟာလည်း တစ်ကားအပါအဝင်လို့ ဆိုရမှာပါ။
သာမန်horror ​တွေနဲ့ မတူဘဲ ထူးခြားပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီး မြှုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့ နာမည်ကြီးတာမို့ အက်ဒ်မင်တစ်ယောက် သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ ယောင်းတို့ရေ… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့…..
အချိန်ကာလ နှစ်ပိုင်း ပါပါတယ်။ ပထမအချိန်ကာလက Adelaide ဆိုတဲ့ လူမည်းမိန်းကလေးရဲ့ ၁၉၈၆ခုနှစ်တုန်းက ငယ်ဘဝနဲ့ ဒုတိယအချိန်ကာလက သူမရဲ့ ယခုလက်ရှိဘဝ။
၁၉၈၆ခုနှစ်မှာ Adelaide ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် Adelaideကို သူမ မိဘတွေက Santa Cruz ကမ်းခြေကို လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာ Amusement park ရှိတာကြောင့် လျှောက်သွားရင် ကစားတဲ့ မှန်အိမ်တစ်လုံးထဲ ဝင်မိသွားပါတယ်။ အဲဒီအိမ်က မှန်တွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး အိမ်ရဲ့ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ သူမနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ ကလေးမလေးကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
Related Article >>> တစ်ယောက်တည်း မကြည့်သင့်တဲ့ ဘောလိဝုဒ်သရဲကား (၄)ကား
Adelaideမသိခဲ့တာကတော့ ပုံစံတူ ကလေးမလေးဟာ ဖန်တီးထားတဲ့ ကလုန်း တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ရှင်းပြထားတဲ့ သီအိုရီတွေအရ အမေရိကန်အစိုးရဟာ နည်းပညာအလွန်မြင့်မားလာတဲ့အခါ မြေပေါ်က လူတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ မျိုးဗီဇကို ခိုးယူထားပြီး ကလုန်းတွေကို မျိုးဆက် တစ်ဆက်ပြီး တစ်ဆက် ဖန်တီးပါတော့တယ်။ ဒါတွေဟာ ပုံစံတူ ကလုန်းတွေမို့ သူတို့ ဖန်တီးထားတဲ့ကလုံးတွေရဲ့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် မြေပေါ်က မူလနေထိုင်သူ လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုပါ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ တွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရလဒ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး အပေါ်က လူတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ မြေအောက်က လူတွေသာ အပေါ်က မူလ လူတွေအတိုင်း တစ်ထေရာတည်း လိုက်လုပ်နေရပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုကျရှုံးတာကြောင့် အစိုးရဟာ ဒီစမ်းသပ်မှုကို ဒီအတိုင်း ပစ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် အပေါ်က လူတွေက သာယာနေတဲ့အချိန်မှာ မြေအောက်က စမ်းသပ်ခံတွေကတော့ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနဲ့ သူတို့ဘာသာ ယုန်တွေကို အစိမ်းလိုက် စားသောက်နေရပြီး လူရိုင်းသာသာ ဖြစ်လာပါတယ်။ မြေအောက်က စမ်းသပ်ခန်းကြီးထဲမှာ ယုန်တွေကိုလည်း ပုံစံတူ ပွားထားတာမို့ ယုန်ကတော့အတော်ပေါပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကို မသိတဲ့ Adelaideဟာ သရဲကို မြင်လိုက်ရသလို အရမ်းကို ထိတ်လန့်ချောက်ချားသွားပြီး trauma ရသွားတာမို့ အချိန်အတော်ကြာ စကားမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကောင်မလေးဟာ Adelaideနောက်ကို လိုက်နေတယ်လို့ Adelaide က အမြဲတွေးနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ်ကို ရောက်လာပြီး Adelaide တစ်ယောက်လည်း လင်နဲ့ သားနဲ့ သမီးနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ အရွယ်ကို ရောက်လာပါတယ်။ Adelaide ခင်ပွန်းဟာ အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုကို မိသားစုအတွက် စီစဉ်ခဲ့ပြီး နေရာကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။
Adelaideဘဝကို တချိန်လုံး ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ Santa Cruz ကမ်းခြေပါပဲ။ တကယ်လည်း Adelaide စိတ်ထဲ ထင်နေတဲ့အတိုင်း ကို သူမ မိသားစုဆီကို လူစိမ်းလေးယောက်က မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ မိသားစုနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ ကလုန်းမိသားစုဖြစ်ပြီး Adelaideတို့ လူအစစ်တွေကို လက်စားချေဖို့ ရောက်လာတာပါ။
Adelaideတစ်ယောက် သူ့ မိသားစုကို ကယ်တင်နိုင်မှာလား?
ဒီ ကလုန်းတွေကပဲ လူအစစ်တွေကို အနိုင်ယူသွားမှာလား?
စတာတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားကြည့်ပါနော်….
သူက သရဲကားတွေလို ဖြဲခြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှေ့ဆက် ဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို တွေးပူပြီး ရင်ခုန်နေရတာမျိုးပါ။ ကြာချိန်က ၂နာရီ ၁မိနစ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်လို ပြီးသွားမှန်းမသိအောင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။
အဓိကက သူမတူအောင် ထူးခြားတဲ့ horror ဇာတ်အိမ် တည်ဆောက်ပုံနဲ့ လှည့်ကွက်/မြှုပ်ကွက်တွေကြောင့်ပါ။ လှည့်ကွက်တွေ အများကြီးပါနေတာမို့ တော်တော်များများ ကြည့်ပြီး နားမလည်ကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အက်ဒ်မင်ရှင်းပြတဲ့ ကလုန်းသီအိုရီတစ်ခုကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဇာတ်လမ်းကို သေချာနားလည်အောင် ကြည့်လို့ရပါပြီ။ အက်ဒ်မင်တုန်းကတော့ အဲဒီ သီအိုရီကို မသိခဲ့လို့ ရုံထဲကနေ အူလည်လည်၊ စိတ်မတင်မကျနဲ့ ပြန်ထွက်လာရတယ်။
ဒီကားမှာ plot twistက အသက်ပါ။ ဒါကို Spoil မိမှာစိုးလို့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အရေးပါဆုံး plot twist ကို လုံးဝမပြောထားပါဘူးနော်။ (ကွကိုယ် ကြည့်…😛)
Horror ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားအနေနဲ့ IMDB Rating မှာ အရမ်းအမြင့်ကြီးရဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Us ဇာတ်ကားကတော့ IMDB Rating မှာ 7.5 အထိ ပေးခံရပါတယ်။ တစ်ခုပဲ… သွေးသံရဲရဲတွေ ကြမ်းတမ်းတာတွေပါလို့ အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေ ကြည့်ခွင့်မရှိပါဘူးနော်..
ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ ကြည့်ရ အလွန်တန်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
Mia ( For Her Myanmar)
ဖွဲခွောကျနတောမဟုတျဘဲ ကွညျ့ရငျးနဲ့ကို ကြောခမျြးလာမယျ့ ဇာတျကား
Horror ကားထဲမှာမှ plot twist တှေ၊ မွှုပျကှကျတှေ ရှယျပါတဲ့ ရုပျရှငျကို ညှနျးပါဆိုရငျ အခု နာမညျကွီးနတေဲ့ Us ရုပျရှငျဟာလညျး တဈကားအပါအဝငျလို့ ဆိုရမှာပါ။
သာမနျhorror တှနေဲ့ မတူဘဲ ထူးခွားပွီး အဓိပ်ပါယျတှေ အမြားကွီး မွှုပျထားတဲ့ ဇာတျလမျးလို့ နာမညျကွီးတာမို့ အကျဒျမငျတဈယောကျ သှားကွညျ့ဖွဈခဲ့တယျပေါ့ ယောငျးတို့ရေ… ဇာတျလမျးအကဉျြးကိုပွောရရငျတော့…..
အခြိနျကာလ နှဈပိုငျး ပါပါတယျ။ ပထမအခြိနျကာလက Adelaide ဆိုတဲ့ လူမညျးမိနျးကလေးရဲ့ ၁၉၈၆ခုနှဈတုနျးက ငယျဘဝနဲ့ ဒုတိယအခြိနျကာလက သူမရဲ့ ယခုလကျရှိဘဝ။
၁၉၈၆ခုနှဈမှာ Adelaide ရဲ့ မှေးနအေ့တှကျ Adelaideကို သူမ မိဘတှကေ Santa Cruz ကမျးခွကေို လိုကျပို့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ကမျးခွမှော Amusement park ရှိတာကွောငျ့ လြှောကျသှားရငျ ကစားတဲ့ မှနျအိမျတဈလုံးထဲ ဝငျမိသှားပါတယျ။ အဲဒီအိမျက မှနျတှနေဲ့ ပွညျ့နပွေီး အိမျရဲ့ တဈနရောအရောကျမှာတော့ သူမနဲ့ တဈပုံစံတညျးတူတဲ့ ကလေးမလေးကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တှလေို့ကျရပါတယျ။
Related Article >>> တဈယောကျတညျး မကွညျ့သငျ့တဲ့ ဘောလိဝုဒျသရဲကား (၄)ကား
Adelaideမသိခဲ့တာကတော့ ပုံစံတူ ကလေးမလေးဟာ ဖနျတီးထားတဲ့ ကလုနျး တဈခု ဖွဈတယျဆိုတာပါပဲ။ ဒီရုပျရှငျကို ရှငျးပွထားတဲ့ သီအိုရီတှအေရ အမရေိကနျအစိုးရဟာ နညျးပညာအလှနျမွငျ့မားလာတဲ့အခါ မွပေျေါက လူတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ ကွိုးစားလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတှရေဲ့ မြိုးဗီဇကို ခိုးယူထားပွီး ကလုနျးတှကေို မြိုးဆကျ တဈဆကျပွီး တဈဆကျ ဖနျတီးပါတော့တယျ။ ဒါတှဟော ပုံစံတူ ကလုနျးတှမေို့ သူတို့ ဖနျတီးထားတဲ့ကလုံးတှရေဲ့ စိတျကို ထိနျးခြုပျနိုငျရငျ မွပေျေါက မူလနထေိုငျသူ လူတှရေဲ့ စိတျကိုပါ ထိနျးခြုပျနိုငျမယျလို့ တှေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ရလဒျက ပွောငျးပွနျဖွဈသှားပွီး အပျေါက လူတှကေို မထိနျးခြုပျနိုငျဘဲ မွအေောကျက လူတှသော အပျေါက မူလ လူတှအေတိုငျး တဈထရောတညျး လိုကျလုပျနရေပါတယျ။ စမျးသပျမှုကရြှုံးတာကွောငျ့ အစိုးရဟာ ဒီစမျးသပျမှုကို ဒီအတိုငျး ပဈထားခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒါကွောငျ့ အပျေါက လူတှကေ သာယာနတေဲ့အခြိနျမှာ မွအေောကျက စမျးသပျခံတှကေတော့ အနဆေငျးရဲ အစားဆငျးရဲနဲ့ သူတို့ဘာသာ ယုနျတှကေို အစိမျးလိုကျ စားသောကျနရေပွီး လူရိုငျးသာသာ ဖွဈလာပါတယျ။ မွအေောကျက စမျးသပျခနျးကွီးထဲမှာ ယုနျတှကေိုလညျး ပုံစံတူ ပှားထားတာမို့ ယုနျကတော့အတျောပေါပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျကို မသိတဲ့ Adelaideဟာ သရဲကို မွငျလိုကျရသလို အရမျးကို ထိတျလနျ့ခြောကျခြားသှားပွီး trauma ရသှားတာမို့ အခြိနျအတျောကွာ စကားမပွောနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒီကောငျမလေးဟာ Adelaideနောကျကို လိုကျနတေယျလို့ Adelaide က အမွဲတှေးနခေဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၉ခုနှဈကို ရောကျလာပွီး Adelaide တဈယောကျလညျး လငျနဲ့ သားနဲ့ သမီးနဲ့ ဖွဈလာတဲ့ အရှယျကို ရောကျလာပါတယျ။ Adelaide ခငျပှနျးဟာ အပနျးဖွခေရီးတဈခုကို မိသားစုအတှကျ စီစဉျခဲ့ပွီး နရောကတော့ တခွားမဟုတျပါဘူး။
Adelaideဘဝကို တခြိနျလုံး ထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့စခေဲ့တဲ့ Santa Cruz ကမျးခွပေါပဲ။ တကယျလညျး Adelaide စိတျထဲ ထငျနတေဲ့အတိုငျး ကို သူမ မိသားစုဆီကို လူစိမျးလေးယောကျက မဖိတျချေါဘဲ ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သူတို့ မိသားစုနဲ့ တဈပုံစံတညျးတူတဲ့ ကလုနျးမိသားစုဖွဈပွီး Adelaideတို့ လူအစဈတှကေို လကျစားခဖြေို့ ရောကျလာတာပါ။
Adelaideတဈယောကျ သူ့ မိသားစုကို ကယျတငျနိုငျမှာလား?
ဒီ ကလုနျးတှကေပဲ လူအစဈတှကေို အနိုငျယူသှားမှာလား?
စတာတှကေိုတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ သှားကွညျ့ပါနျော….
သူက သရဲကားတှလေို ဖွဲခွောကျတာမဟုတျဘဲနဲ့ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ရှဆေ့ကျ ဘာဖွဈကွမလဲဆိုတာကို တှေးပူပွီး ရငျခုနျနရေတာမြိုးပါ။ ကွာခြိနျက ၂နာရီ ၁မိနဈဆိုပမေယျ့ ဘယျလို ပွီးသှားမှနျးမသိအောငျ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးပါတယျ။
အဓိကက သူမတူအောငျ ထူးခွားတဲ့ horror ဇာတျအိမျ တညျဆောကျပုံနဲ့ လှညျ့ကှကျ/မွှုပျကှကျတှကွေောငျ့ပါ။ လှညျ့ကှကျတှေ အမြားကွီးပါနတောမို့ တျောတျောမြားမြား ကွညျ့ပွီး နားမလညျကွပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ အကျဒျမငျရှငျးပွတဲ့ ကလုနျးသီအိုရီတဈခုကို ဖတျပွီးရငျတော့ ဇာတျလမျးကို သခြောနားလညျအောငျ ကွညျ့လို့ရပါပွီ။ အကျဒျမငျတုနျးကတော့ အဲဒီ သီအိုရီကို မသိခဲ့လို့ ရုံထဲကနေ အူလညျလညျ၊ စိတျမတငျမကနြဲ့ ပွနျထှကျလာရတယျ။
ဒီကားမှာ plot twistက အသကျပါ။ ဒါကို Spoil မိမှာစိုးလို့ ဇာတျလမျးရဲ့ အရေးပါဆုံး plot twist ကို လုံးဝမပွောထားပါဘူးနျော။ (ကှကိုယျ ကွညျ့…😛)
Horror ရုပျရှငျကား တဈကားအနနေဲ့ IMDB Rating မှာ အရမျးအမွငျ့ကွီးရဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Us ဇာတျကားကတော့ IMDB Rating မှာ 7.5 အထိ ပေးခံရပါတယျ။ တဈခုပဲ… သှေးသံရဲရဲတှေ ကွမျးတမျးတာတှပေါလို့ အသကျမပွညျ့တဲ့သူတှေ ကွညျ့ခှငျ့မရှိပါဘူးနျော..
ခွုံပွီးပွောရရငျတော့ ကွညျ့ရ အလှနျတနျတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
Tagged Clone, Fun, Horror, Movie, review, Thriller, us
သရဲကြောက်တဲ့သူငယ်ချင်းကို သရဲကားကြည့်ဖို့ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ?
Posted on June 22, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ် စနစ်တကျအကွက်ချပြီး အထာကျကျဇာတ်သွင်းကြမယ်
ငိုကြွေးနေတဲ့ အမျိုးသမီး လာယိုရိုနာ
Posted on September 15, 2017 September 15, 2017 Author Christina Rosy
မက်ဆီကိုက “လာယိုရိုနာ”ဆိုတဲ့ သရဲမအကြောင်းယောင်းတို့သိကြမယ်မထင်ပါဘူး။ အက်ဒမင်တောင်အခုမှ ရှာဖတ်ရင်းသိလာရလို့ ယောင်းတို့ဆီယူလာတာ။
သင်္ကြန်တွင်း ရေစိုလည်းအလှမပျက်စေမယ့် ရေစိုခံမိတ်ကပ်လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်